खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत घरेलु कामदारहरूको प्रतिबन्ध हटाउने विषय सहमति नजिक
बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स नै नेपालको अर्थतन्त्रको चौथो मुख्य श्रोत रहेको छ । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार प्रति हुने श्रम शोषणका कारण नेपाल सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको थियो। खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत घरेलु कामदारहरू छुट्टीमा घर आएपछि फर्किन नपाउने भएपछी यस बिषयले केहि समस्या उत्पन्न गरेको थियो । खास गरि नेपाली महिला दिदिबहिनिहरु जो धेरै जसो घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुकमा कार्यरत छन् । प्रतिवन्ध पश्चात पनि धेरै नेपाली महिला कामदारहरु घरेलु कामदारको रुपमा लुकी छिपी तेश्रो मुलुक हुदै खाडी मुलुक पुगेका अवस्था रहेको छ । त्यसरी प्रतिवन्ध लगाउँदा पनि नेपालीहरु घरेलु कामदारको रुपमा खाडि मुलुक पुगेपछि उद्धार गर्नु पर्ने अवस्था आएमा प्रतिवन्धका कारण समस्या रहेको जानकारहरु बताउछन ।त्यसैले यस बिषयलाइ लिएर सरकारले चांडो भन्दा चांडो टुंगो लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
श्रम मन्त्रालय र संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता समिति बीच भएको वार्ताले बाटो देखाउनेमा बिस्वस्त छन् बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यवसायीहरु ।
राम्रो सुरक्षा छ अनि भिसा पनि छ भने श्रम मन्त्रालयले एक पटकलाई हो की सधैँलाई खोल्ने हो? के सोच बनाएको हो? कानुनी त्रुटी छ भने त्यसलाई सच्च्याउन के गरेको छ? यी सबै कुराको निर्क्यौल मन्त्रालयले हामीलाई पठाओस्।
विमलप्रसाद श्रीवास्तव, सभापति,उपभोक्ता समिति
कामदारको सबै कुरा वैधानिक र विश्वस्त हुनसक्छ भने त्यस्तोलाई जान स्वीकृति दिने की भन्ने छलफल भयो। समितिले मागेका कागजातहरू पूरा गरेर एकहप्ता भित्र फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको छ।
महेश दाहाल, सचिव, श्रम मन्त्रालय